Sidee ayey khidmadda halista ahi u saamaysaa suuqa saamiyada? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Sidee ayey khidmadda khatartu u saameynaysaa suuqa saamiyada?
Lacagta halista waa mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan ee lagu go'aaminayo isbeddelka suuqyada saamiyada. La yaab ma ahan, maalgashadayaashu waxay fiiriyaan maalin kasta si ay u go'aamiyaan go'aamada ay gaarayaan si ay uga dhigaan keydkooda faa'iido. Si kastaba ha noqotee, marka ugu horreysa waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la ogaado waxa ereygan dhaqaale ee muhiimka ah dhab ahaantii loola jeedo. Hagaag, qaddarinta halista ayaa ugu horreyntii dhammaan farqiga u dhexeeya xiisaha taas ayaa laga codsanayaa deynta ay soo saartay waddan hantideedu ay khatar weyn ku jirto marka loo eego qatar kale oo aan khatar lahayn.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, oo aad si fiican u fahamto macnaheeda dhabta ah, waa inaad ogaataa in nooca noocan ah ee loo yaqaan 'premium' ay si fiican uga dhex ogyihiin qayb wanaagsan oo ka mid ah maalgashadayaasha sida halista dal ka yimid. Sababtoo ah saameyn ahaan, wax kayar iyo wax aan ka badnayn cabbiraadda halista ummaddu soo mari karto, waxay doonto ha noqotee. Oo waxaa aad loogu yaqaanay dhacdooyinka in horumaray intii lagu jiray xiisaddii dhaqaale ee ugu dambeysay, halkaas oo maalin kasta waxa ugu horreeya ee dhammaan dhexdhexaadiyeyaasha maaliyadeed ay sameeyeen ay ahayd in la xaqiijiyo waxa qiimaha halista ah ee Spain uu ahaa. Sababtoo ah illaa xad, iyo waxay kuxirantahay isbeddelkeeda, suuqa saamiyada ayaa ku dhacay ama ku kacay xoog ama ka yar xoog.
Mid ka mid ah furayaasha qaddarka halista ayaa ah sida loo xisaabiyo, maadaama mararka qaarkood ay soo saarto dhibaato aan caadi ahayn si loo gaaro boqolleyda xogtan dhaqaale ee muhiimka ah. Hagaag, khidmadaha halista ah ee Isbaanishka, sida kuwa waddan kasta oo deegaankeenna ka mid ah, waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo laga jarayo dulsaarka lagu bixiyay curaarta tobanka sano ah Isbaanishka dulsaarka laga bixiyay curaarta Jarmalka ee ku saleysan dhibcaha. Sababtoo ah saameyn ahaan, isku xidhka Jarmalka waa barta tixraaca si loo go'aamiyo waxa heerkiisu yahay marwalba. Iyada oo leh saameyn ka duwan sidii hore, waxay kuxirantahay isbeddelkeeda.
1 Xiriir deynta Jarmalka
2 Lacagta halista: heerarkeeda
3 Saamaynta qiimaha khatarta sare leh
4 Dhibco yari iyo ka qaalisan
5 Lacagtu waxay raadisaa suuqyo kale
Xiriir deynta Jarmalka
Si loo go'aamiyo khidmadda halista, waxaa aad muhiim u ah in maskaxda lagu hayo in aysan kaliya aheyn daciifnimada deynta Isbaanishka, laakiin sidoo kale xoogga deynta Jarmalka. Waxqabadkaan, waxaa jira lacag aad u fara badan oo ka soo baxda gacanta iyo guulwadeyaal iyo guuldarooyin badan. Waa mid ka mid ah arrimaha ku soo bixi doona qodobkaan. Sababtoo ah waxay kaa caawin kartaa inaad boos ka qaadato hal ama hanti kale oo maaliyadeed. Ilaa heer aad kasban karto lacag aad u tiro badan, laakiin isla sababahaas awgood, oo aad uga tagayso euro xad-dhaaf ah wadada. Waa abaalmarin ay tahay in lagu bixiyo qiimaha halista ee waddan, xaaladdan Spain.
Xaaladdan guud dhexdeeda, qiimaha halista wuxuu ku qoran yahay suuqyada maaliyadeed sida haddii ay ahayd hanti maaddaama tan iyo dhamaadka maalinta ay tahay. Iyada oo kala duwanaansho joogto ah maalin kasta iyo in dhamaadka go'aaminta faa'iidada maalgashiga. Dareenkan, waxay u taagan tahay faa iidada ugu weyn ee maalgashadaha iyada oo lagu badalayo halis weyn. Sidaad arki doonto, ereyga halista markasta wuxuu kujiraa ficilladooda oo dhan, maadaama dhanka kale ay macquul tahay in la fahmo. Si ahaanna, waxaa loogu rakibay qaamuuska qayb wanaagsan oo kamid ah maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Hal dhinac ama mid kale, sida dabiiciga ah iyo haddii kale la fahmi karo.
Lacagta halista: heerarkeeda
Waqtigan xaadirka ah waxay noqon doontaa mid gebi ahaanba lama huraan ah in la ogaado sababta qiimaha sare ee halistu ugu jiro hal heer ama mid kale. Hagaag, markii la dhaho qiimaha halista ee Spain waa heerarka 100 dhibcaha aasaasiga ah, waxay ka dhigan tahay inaysan khatar ugu jirin dhaqaalaha qaranka. Si kale haddii loo dhigo, waa xaalad runtii ku habboon waxqabadka dhaqaalaha. Iyada oo saameyn aad u cad ku leh suuqyada sinnaanta adoo doorbidaya isweydaarsiyada saamiyada sii wad kor uqaad ciladan awgeed. Meesha iibsiyada lagu soo rogay si cad oo weyn oo ku saabsan iibka. Xaqiiqdii waa war sifiican ay u wada heleen dhamaan dhexdhexaadiyaasha dhaqaalaha maalgashadayaashuna kama maqnaan karaan iyaga dhexdooda.
Taas bedelkeeda, markii lacagta halista ahi ka baxdo xakamaynta, sida ka sarreysa dhibcaha 400 ee aasaasiga ah, waxay leedahay macno gebi ahaanba ka soo horjeedda. Xaqiiqdii waa natiijada xaqiiqda ah in khatartu ay aad u sarreyso oo dadaal weyn loo baahan yahay in lagu sameeyo si loo beddelo isbeddelladan ama meertada dhaqaale. Sida la fahmi karo, suuqyada maaliyaddu uma qaataan xaqiiqadan si wanaagsan waxna way u jiraan bacaha ku jira, xitaa leh xoog gaar ah. In ka yar ama ka yar waa milicsiga wixii Spain ka dhacay bilowgii xiisadda dhaqaale, qiyaastii 2012 iyo 2013, markii qiimaha halista ay gaareen heerar cabsi leh runtii.
Saamaynta qiimaha khatarta sare leh
Waxaa la joogaa xilligii la falanqeyn lahaa saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha waddan iyo gaar ahaan marka heerkan tabaruca ahi aad u sarreeyo. Sababtoo ah saameynteeda ayaa ka khuseeya inta aad rumaysan lahayd bilawga. Si toos ah u saameynaya jeebka macaamiisha laftooda. Laakiin waa waqtigii adiga si aad u xaqiijiso waxa ugu muhiimsan ee ay yihiin iyo sida aad hadda kadib u ogaan karto.
Sare u kac aad u sareeya oo ku yimid qiimaha sare ee halista wadankeena ayaa sidoo kale ka muuqda xaqiiqada dhabta ah ee shirkadaha. Layaab ma leh, waxay tilmaamaysaa a kharashkaaga sare. Ilaa heer ay sababi karto shaqo la’aanta inay kororto iyada oo aan la qaadan karin qeyb weyn oo ka mid ah wax soo saarkeeda.
Mid ka mid ah saameynta tooska ah ee dhacdadan ayaa ah in danaha ay si aad ah u koraan isla markaana natiijada ka dhalatay isbeddelkan ay tahay in gobolka uu ku keydi lacag aad u badan oo aad ku bixin karto. Tani waxay ficil ahaan ka dhigan tahay inay jiri doonaan lacag ka yar kharashka bulshada, kaabayaasha dhaqaalaha, tikniyoolajiyadda iyo noocyada kale ee adeegyada iyo faa'iidooyinka. Maaha xaaladdii ugu fiicnayd, sidaa darteed, inta badan muwaadiniinta tan iyo markii dawladdu u janjeerto siyaasad dhaqaale oo ku saleysan ugu horreyn kaydinta.
Dabcan, kor u qaadista qiimaha halista ma ahan war wanaagsan oo ku saabsan shaqada, ka fog. Sababtoo ah saameyn ahaan, marka loo eego xisaabinta ay sameeyeen waaxda bangiyada, waxaa la tilmaamayaa in 100-kii dhibic ee aasaasiga ah ee qiimaha halista uu sare u kaco, ku dhowaad 160.000 shaqo ayaa laga abuuray Spain. Sidaa darteed, adoo iftiiminaya xiriir cad oo ka dhexeeya qiimaha sare ee halista badan iyo kan shaqo abuurka dal. Sida ka dhacday Isbaanish sannadihii la soo dhaafay, halkaasoo xaddidan dhaqaale ay ka soo gudubtay 500 oo ay ka hooseyso 100 dhibic aasaas sannado yar gudahood, sida hadda dhaceysa.
Dhibco yari iyo ka qaalisan
Sidoo kale ma iloobi karno xaqiiqo kale oo milicsiga bulshada muhiim u ah kana soo jeeda baahida loo qabo in la isku maalgeliyo marinnada suuqgeynta caadiga ah, marka laga hadlayo, bangiyada waa inay bixiso lacag badan si aad uhesho dhaqaale xaqiiqadana isla markiiba waa loo gudbiyaa adeegsadaha. Xaqiiqadani waxay muujineysaa in bixinta khadadka amaahdu ay gaabis tahay iyo in xaaladuhu ay aad uga xun yihiin tan iyo hadda. Taasi waa, macmiilku ma lahan wax kale oo aan ka aheyn inuu bixiyo dulsaar sare si uu awood ugu yeesho inuu naftiisa maalgeliyo. Taasi waa in la yiraahdo, labada qaybood ee geeddi-socodka ayaa si cad u saameyn doona isbeddelkan khatarta khatarta ah.
Dhinaca kale, xaqiiqda ah in isticmaalku si gaabis ah u yaraanayo sidoo kale aad ayuu u khuseeyaa. Waxaa jira lacag yar oo dhaqaajinaysa taas awgeedna iyaga ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee dhaqaalaha waddanku waxyeello u geysto. Ilaa heerar heer sare ah oo qatar u noqon kara qof walba. Magac ahaan, hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta badan oo ah qaar ka mid ah doorsoomayaasha ugu muhiimsan ee taasna ay ogaadaan qayb wanaagsan oo ka mid ah wakiillada bulshada. Waa qallafsanaan aad u taban oo aan lahayn wax qoddobo togan leh, sida aan ku tilmaameyno maqaalkan.
Lacagtu waxay raadisaa suuqyo kale
Sidoo kale lama iloobi karo in marka xaaladdan la soo saaro ay lacagtu gacmaha is bedesho. Tan macnaheedu waxa weeye in qulqulka maal-gashiga uu isku dayo inuu helo suuqyo kale oo maaliyadeed oo iyaga siiya nabadgelyo iyo xasillooni weyn. Badanaa jihada laba jibaaran, tusaale ahaan Jarmalka ama Waqooyiga Ameerika. Waa milicsiga in lacagta waqtigan aysan wadan lahayn, laakiin ay raadineyso faa iidadeeda gaarka ah, kana sareyso tixgelinta kale ee farsamo. Dabcan, dhacdooyinkan ma ahan faa'iidada ugu wanaagsan ee ay heli karaan.
Tani waa dhiirigelin kale oo loogu talagalay maalgashadayaasha waaweyn inay lacagtooda u wareejiyaan suuqyada kale ee sinnaanta. Iyada oo ay jirto cadaadis iib ah oo ku saabsan qiimaha saamiyada maaddaama iibsadayaashu ay saameynayaan isbeddelkan gaarka ah ee dhacaya taasna waxaa lagu gartay maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Sababtoo ah shaki kuma jiro in wax iibsiga lagu sameyn karo qiimayaal aad ula jaanqaadi kara xaqiiqda cusub. Marka laga soo tago isu soo baxyada suurtagalka ah ee ka dhici kara suuqyada maaliyadeed ee qaranka, iyada oo ay jirto xoog ama mid kale. Layaab ma leh, waa khatar kale oo dheeraad ah oo maalgashadayaashu leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Sidee ayey khidmadda khatartu u saameynaysaa suuqa saamiyada?
Sidee ayey khidmadda waraabku u saameynaysaa maalgashiga?